ရွှေဖရုံသီးမျိုးစေ့ - ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးနှင့်၎င်းကိုမည်သို့စားသုံးရမည်ကိုသိရှိပါ။
အစာ	 15 ဇန်နဝါရီလ 2019
A ဖရုံသီးအမျိုးအနွယ် ၎င်းသည်ကျန်းမာရေး၊ သုခချမ်းသာနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဗေဒများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်၊ ဒီမျိုးစေ့ထဲမှာပြproblemsနာများစွာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေကြတဲ့သုတေသီအတော်များများကဒီလေ့လာမှုကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။
အောက်ပါခေါင်းစဉ်များ၌သင်သည်ဖရုံသီးမျိုးစေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှအရာအားလုံး၊ ၎င်း၏အမှန်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ မည်သို့စားသုံးသင့်သည်နှင့်ဤပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားသက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ထွက်ခွာသည်!
အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာဖရုံသီးမျိုးစေ့သည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ အမျိုးသားများတွင်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ စိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းမွန်စေသည်၊ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေသည့်အပြင်သင့်အသည်းကိုပုံမှန်အလုပ်လုပ်စေသည့် antioxidants များစွာပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးမှာအစေ့များကိုကိုယ်တိုင်စားသုံးခြင်း၊ ဖရုံသီးမှယူပြီးသုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားပန်းကန်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖရုံသီးအစေ့ဆီလည်းရှိသည်၊ အစားအစာတွင်အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့အရေပြားနှင့်အသားအရေကိုပါဖြတ်သွားနိုင်သည်။ ။
အများအားဖြင့် Styria ဟုခေါ်သောအထူးဖရုံသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစျေးကွက်သို့မဟုတ်စူပါမားကတ်တွင်ဖရုံသီးကို ၀ ယ်သောအခါသင်ဝယ်သောကုန်ကြမ်းမျိုးစေ့နှင့်အလားတူအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဖရုံသီးအစေ့များကိုအသုံးပြုလိုပါကအဓိကအစွန်အဖျားသည်၎င်းကိုအအေးမသုံးရ၊ ကြော်မထည့်ဘဲ၊ အကြောင်းမှာမျိုးစေ့၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည့်အခါပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်၎င်းအာဟာရအချို့ကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အသုံးအများဆုံးကတော့အစေ့တွေကိုခွဲပြီးသူတို့နဲ့အတူအအေးသုပ်တစ်ခုပါ။ ဤအသုပ်သည်အပူပိုင်းဒေသ၊ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများနှင့်ဖရုံသီးမျိုးစေ့များဖြင့်ပြီးဆုံးနိုင်သည်။
သငျသညျဖရုံသီးမျိုးစေ့၎င်း၏ကုန်ကြမ်းပုံစံ, ဒီခဲဖွယ်စားဖွယ်ကိုသုံးဟင်းလျာများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများမှတဆင့်စားသုံးနိုင်သည်, သို့မဟုတ်သင်ဖရုံသီးအမျိုးအနွယ်ကိုဆီမှတဆင့်သို့မဟုတ်အခြေခံအဖြစ်ဖရုံသီးအမျိုးအနွယ်ကိုအသုံးပြုအစားအစာဖြည့်စွက်ယူခြင်းအားဖြင့်။
ဤအရာများသည်သင်မျိုးစေ့ကိုနေ့စဉ်စားသုံးရန်နှင့်၎င်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုရယူရန်အတွက်သင်ရွေးချယ်ရမည့်အဓိကနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာ၎င်းကိုအလွန်အကျွံမသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်မျိုးစေ့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်အကြိမ်အနည်းငယ်လောက်သည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။ နေ့စဉ်ကယ်လိုရီများလွန်းခြင်းကြောင့်သင့်ကိုအဆီဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဖရုံသီးမျိုးစေ့သည်ပရိုတင်း၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်များစွာကြွယ်ဝသောကြောင့်ဤအရာအားလုံးသည်ကြွက်သားများပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ အနည်းငယ်စားသုံးပါကကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သည်။
ပြနာကဖရုံသီးအစေ့များမှာကယ်လိုရီများတာကြောင့်သင်အလွန်အကျွံစားလျှင်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်မည်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာလိမ့်မည်။
သင်၏ဖရုံသီးမျိုးစေ့ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာအရောင်အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောအရောင်အသွေးစုံလင်သောအသုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဆလတ်၊ အနီရောင်ဆလတ်၊ အာဂူလာ၊ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးများ၊ သရက်သီး၊ သံလွင်ပင်များ၊ ပြောင်းဖူး၊ ဤအရာအားလုံးသည်ဆား၊ ဆီနှင့်သံပုရာအနည်းငယ်နှင့်ရောစပ်ထားသည်။ ဒါဟာအရသာဖြစ်ပါသည်, ပို။ ပင်လှပသောအသားနှင့်ပေါင်းစပ်။
Rice Cracker: ဘယ်လောက်ကယ်လိုရီရှိသလဲ။ အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ဘယ်လိုလုပ်ရ?
Diet ဖြတ်တောက်ခြင်း: အဲဒါဘာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရ? ဒီမှာရှာပါ။
လှေကားထစ် Simulator: အသစ်သောအားကစားရုံအဖျားရှာဖွေတွေ့ရှိ!